Etu ị ga - esi wulite omenaala na - eme ka Companylọ Ọrụ Gị Dịkwuo Ala | Martech Zone
N'afọ gara aga nwere ihe metụtara ọrụ niile, ọ ga-abụ na ị nọ na njedebe nke ịsọ asọmpi. Na ngalaba CMOs na ngalaba ahia na-agbake site na otu afọ nke nkwụghachi azụ azụ azụ, ebe itinye ego ahia gi dolla n’aho a nwere ike iweghachi gi n’ime ahia gi.
Ugbu a bụ oge itinye ego na ngwọta ziri ezi na-eduga na teknụzụ iji mepee echiche ahịa dị mma. Ọ bụghị ebe a na-edekọ ọnụ ọnụ ọnụ ụlọ nke disparate arịa dị iche iche nwere agba ndị ahọpụtara tupu ha enwee nsogbu (na-adịghị agbanwe agbanwe), kama ọ bụ otu ahaziri nke dabara adaba na ohere gị pụrụ iche (ị ga - arụzi azịza Martech nke gị).
Ọ bụrụ na uche gị dị na ọgbọ na uto, na -emepụta ọdịbendị na-eche data na iwulite teknụzụ ziri ezi iji jiri data ahụ bụ isi ihe ga-eme ka ị nweta nsonaazụ ahịa ka mma. Nke a bụ otu:
1. Obere Mmeri Nwere Ike Inwe Nnukwu Mmetụta
Ma usoro gị dị ka nke akwụkwọ si dị ka nke anyị laghachiri na 2014, ma ọ bụ na ị nwere ma na-arụ ọrụ ịzụ ahịa zuru oke na ngwọta dịka HubSpot, Marketo, ma ọ bụ ActiveCampaign, ịchọta ụzọ ọhụrụ iji jikọọ ma jiri data gị nwere ike ịkwụsị ma ọ bụrụ otu gị ejighi iji mgbanwe na mgbanwe.
Obere mmeri nwere ike inwe nnukwu nsogbu.
Malite na obere ụzọ - dị ka ịgbakwunye mpaghara ole na ole nke data ọrụ ndị ahịa na ihe ndekọ ịkpọtụrụ ahịa gị - nwere ike ịmeghe mkpọsa ndị na-aga nke ọma.
Mgbe gị otu otu nwetara a data itinye ego n'ụdị nsonaazụ, ị ga-ịgbanwee echiche si "ka m na-arụ ọrụ na ihe nke ọma" na "olee ọhụụ ọhụrụ anyị nwere ike imeghe? ”
2. Etinye ego na Right Resources
Y’oburu n’igbanwe mgbanwe gharii ka ire ahia gi gha abu isi, n’oge na adighi anya i gha aghaghi inwe nsogbu site na ime ihe.
Ha agaghi eto n’uzo ikwesiri, ebum n’uche ha agaghi adi na nke gi.
Ihe ngwanrọ sọftụwia ndị a siri ike na-anwa ijere ọtụtụ narị ụlọ ọrụ ọrụ aka, ngalaba ụlọ ọrụ gị pụrụ iche ga-achọ ụfọdụ ịhazi omenala iji kpọghee ọkwa ezubere iche gafere ikike ndị asọmpi gị.
Maka nsonaazụ kacha mma, o yikarịrị ka ị ga-eme ka ọnọdụ ahụ sie ike site na itinye ego na ndị ọrụ ntanetị na ụlọ ma na-agbanahụ nyiwe dị mma, nke dị mma.
Iji nwayọọ nwayọọ na-agafe na ngwọta ọdịnala ma na-elekwasị anya na mkpa kachasị mkpa nke nzukọ gị ga-enyere aka gosipụta ọganihu ma kwenye na-agbanwe ego na-emefu ego na-eme n'ọdịnihu.
3. Jikọọ Prospect gị na Ahịa Data gafee Touchpoints
N'ikpeazụ, brik na brik, ị ga-enwe ike iru ihe ngwọta Martech pụrụ iche nke nwere ike ijikọ mpaghara dị iche iche nke azụmaahịa gị maka nghọta ndị ahịa ka mma.
Cheedị ọkwa ebumnuche dịnụ mgbe ị na-enye data sitere na oku ọrụ ndị ahịa dị ndụ na njikwa ngwa ahịa ahịa oge na mkpọsa ahịa gị ọzọ.
Mara ihe mgbu nke ngalaba nke ọ bụla na - ege ntị na - enweta - na ịbawanye ngwa ngwa site n'igosipụta ngwaahịa ole ị hapụrụ n'oge - nwere ike inyere gị aka inweta ozi ziri ezi nye ndị ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị.
Gaa n'ihu otu nzọụkwụ ahụ ma chee otu mmụta site na mkpọsa ahịa a nwere ike isi mee ka ọrụ ndị ahịa ka mma yana njikwa ngwa ahịa.
Ugbu a ị na -emepụta ikpo okwu nke nwere ike inye aka bulie akụkụ ọ bụla nke nzukọ gị.
4. Unroll Mgbanwe na Kachasaa Sample Size Ga-ekwe omume
Omenala ahia amamihe na-eji obere ihe nlele wee wepụta mgbanwe ndị ahụ na nnukwu na nnukwu ìgwè. Approachzọ a na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-eme ihe ngosi obere ahịa.
Mgbe ị na-arụ ọrụ ebe gafee mba ma na-agba ọsọ dị iche iche mkpọsa na mpaghara dị iche iche, mmetụta nke ntinye data ọhụrụ nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche na obere ule vs. na ọnụ ọgụgụ.
Site n'iji obi ike wepụta mgbanwe gị na nnukwu ndị na-ege ntị, ị nwere ike ịmụ ngwa ngwa ma ghara igbu oge na usoro na-adịghị agwụ agwụ nke na-eduhie eduhie. Nnwale ndị ka ukwuu pụtara ụzọ dị mkpirikpi maka ihe ngwọta na-arụ ọrụ nke nwere ike igbo mkpa ọtụtụ azụmahịa gị.
5. Mụta ma Na-emegharị Ngwa ngwa
Ule na ntughari putara na ichoro usoro doro anya ma guzosie ike nke iteration, na uzo di nma iji nyocha nzaghachi nke na-akpali gi n'ihu vs. oke bekee nke mgbanwe ndi ozo nke na-adighi egosi ego ma obu oru.
Tọ ntọala usoro a n'isi ụtụtụ - mgbe ị na - eme mkpọsa ole na ole kwa afọ - nwere ike inyere gị aka izere ịchụso iji nweta azịza n'ọnọdụ ya mgbe ị na - ere ahịa n'ọtụtụ.
Chọpụta ihe doro anya, nzukọ KPI niile na ihe mgbaru ọsọ ogologo oge nwere ike inyere aka kpebie ma ị ga-eme ihe na otu nzaghachi. Ọzọkwa, ọ nwere ike inye gị ihe ị ga-atụ aka mgbe ị na-akọwara ndị otu gị mkpebi gị.
Debe Onwe Gị Maka Ọkwa
Mgbe ị na-elekwasị anya na mkpọsa na-esote, ị na-eme atụmatụ maka afọ atọ ma ọ bụ ise na-esote nwere ike mgbe ụfọdụ ị na-eche na ọ dịghị anya iji kwado ihe ndị na-agbanwe agbanwe.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọpụta ntinye data nke ga - enyere aka mee ka mkpọsa ahụ na - aga nke ọma, ị nwere ike ịmalite ibute ụzọ teknụzụ ị ga - etinye - na ihe ndị na - anọchi anya nchekwa ga - eme ka nke ahụ mee.
Na-arụ ọrụ nke nta nke nta, ịnwere ike ịgbanwegharị njikọ Martech nke nzukọ gị maka ngwọta ọdịnala nke nwere ike ịme ọhụụ ọhụụ nke ịre ahịa data na ịmeghe nsonaazụ dị elu.
Bido obere nwalee nnwale buru ibu, ị ga - ahụ mgbanwe na omenaala na ROI doro anya.
Tags: ndị na-ege ntịahịa datadata chụpụrụ omenaladata-chụpụrụnkatamartiche mixmartech tojupụtaraatụmanya datanlele nhaanwale n'ọtụtụ